Lelee vidiyo zuru ezu
Ihe nchọgharị gị anaghị akwado HTML5 video.
FXCC guzobere na 2010 site na otu ndị ọkachamara n'ahịa ahịa, na-arụ ọrụ ogologo oge ha na ahịa ego, ha gbalịsiri ike ịmepụta ọrụ dabere na ọkwa dị elu nke ha ga-achọ ka ha bụrụ ndị ahịa. Ụlọ ọrụ ahụ gụnyere ndị ọrụ nraranye nke ndị ọkachamara nwere nnukwu ahụmahụ na ụlọ ọrụ ego.
Iji mee ka ọtụtụ ndị ahịa na-etinye aka na ụlọ ọrụ. Anyị na-agba mbọ ka ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa anyị, site na ịnye ọnụahịa asọmpi, site na usoro kachasị mma na usoro nhazi nke ukwuu na ahịa ahia ahịa. Ebumnuche kachasị FXCC bụ iji nye ndị ahịa ya ikike niile ha chọrọ, iji zụlite nkà ha, ka ha na-enwe ọganihu ahịa na-enweghị atụ, n'oge ọ bụla ha na-eme njem.
Ndi kwesiri ntukwasi obi, nke puru iche na nke oma
Ụdị FXCC nke ECN / STP na-enye ndị ọkachamara, ndị ahịa na-azụ ahịa, ndị na-elekọta ego ego na ndị ahịa ahịa na ịnweta oge na-asọ asọ ma na-asọmpi ahịa kpọmkwem site na-eduga multibank liquidity providers.
Ụdị ECN / STP na-enye ndị ahịa FXCC nnwere onwe ịzụ ahịa na ọkwa dị egwu. FXCC arụsiwo ọrụ ike n'ime ka ụwa nke Forex buru uzo karie ogo nke njikwa maka ndị ahịa.
Ụkpụrụ ahịa eji edepụta aha na-adabere n'iji usoro nhazi na-arụ ọrụ (STP), ebe ọ bụla ndị ọrụ FXCC na-ezigara asọmpi na ego ruru eru, na-ekpochapụ ikike maka akara ahịa ọ bụla, ma ọ bụ esemokwu ọ bụla n'etiti ndị ahịa ya.
FXCC's 'No Desal Desk' kpere ihe nlereanya na-abịa na-enweghị onye na-emepụta ọnụ ahịa ma ọ dịghị re-ruturu. Ndị ahịa ahịa na-akwụ ụgwọ na FXCC site na ndị na-enye ya ego. Aggregator Ahịa na-enyocha ihe ndị a ka ọ bụrụ na ndị ahịa na-emesi obi ike na ọ bụ naanị mgbe ha ga-enweta ihe kacha mma Bid / Ask price combinations, hụ na iwu niile na-egbu na a n'ezie asọmpi na transperent usoro.
Ihe mere ị ga-eji mee ihe maka ọkọlọtọ mgbe ị nwere ike
nwere ihe dị iche?
Ahụmahụ & Guzosie ike
Na ndị ahịa kemgbe 2010, na-agbaso usoro na usoro kachasị mma iji mezuo atụmanya gị
N'ịbụ ndị nwere ahụmahụ dị ukwuu na ihe ọmụma, a na-etinye anyị n'ụzọ kwesịrị ekwesị iji ghọta mkpa ndị ahịa anyị na iji kwado ndị ahịa n'ịhụ ọchịchọ ha na ihe mgbaru ọsọ ego. Site n'inweta ihe pụrụ iche nke ihe onwunwe, ọrụ ọkwa VIP, yana nkwado 24 / 5 nkwado ụwa, ọnọdụ azụmahịa anyị dị ala na-enye ihe dị mma iji nweta ihe ịga nke ọma.
Ezi STP mmegbu
Gbaa mbọ hụ na iwu niile a na-eme n'eziokwu na ịkwado ụzọ
Azụmahịa gị na ihe ịga nke ọma ị ga-enwe na-akpaghị aka site na iji nkenke anyị site na nhazi iji mezuo ya, n'ime ECN (netwọk ekwenti).
Ndị ahịa FXCC nwere ike ịzụ ahịa n'egbughị oge, na-erite uru na ntaneti ndụ, ahịa kachasị mma na ahịa, na nkwenye ozugbo. Enweghị ebe okpokoro na-emechi, ọ dịghị ihe ọzọ e kwuru.
Ụlọ Ọrụ Ndị Ahịa
Lekwasị anya na ịbelata ego ị na-ere na-efu ma mee ka ọnụọgụ ahịa gị dịkwuo elu
Anyị na-agba mbọ ka ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa anyị, site na ịnye ọnụahịa asọmpi, site na usoro kachasị mma na usoro nhazi nke ukwuu na ahịa ahia ahịa. ECN XL, nke a makwaara dị ka akaụntụ ZERO bụ otu n'ime akaụntụ kachasị mma ahịa.
Nwee uru na ịmalite ịzụ ahịa na-agbasa site na dịka dịka 0.0 pips, ọrụ nza, nkwụsị efu, akara efu na ego ịkwụ ụgwọ efu.
Obodo siri ike na-achịkwa iwu
Registeredlọ ọrụ itinye ego aha
na Republic of Vanuatu
ya na ndebanye aha 14576.
Onye ikike na CySEC nyere ikike ma dezie ya
dị ka Cyprus Investment Investment (CIF)
na Ndenye ikikere 121 / 10.
Lelee ndi otu na ndekọ
Ndị ahịa '#1 Choice
Ndị ahịa na ndị ọkachamara na-azụ ahịa
Ọrụ Zoro ezo *
Ego nkwụnye ụgwọ Zoro
AKWỤKWỌ NDỊ Ọ BỤRỤ LIVE * Okwu & Ọnọdụ na-emetụta
CENTRAL CLEARING Ltd ka edere aha ya n'okpuru Iwu Ụlọ Ọrụ International (CAP 222) nke Republic of Vanuatu na Ndebanye aha 14576. Onye Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) nyere ikikere dịka onye na-enye ndị ọrụ ego na-enye ego ma nwee ikikere ịga n'ihu na-azụ ahịa na nzuzo n'okpuru ndị Dealers in Securities (Licensing) Act [CAP 70].
FX CENTRAL CLEARING Ltd na-edebanye aha n'okpuru Ụlọ Ọrụ Iwu Cyprus na Ndebanye aha HE 258741. E nyere ikikere dị ka Cyprus Investment Investment (CIF) site na Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), n'okpuru Ọrụ Ntanetị na Ọrụ na Iwu Iwu Iwu nke 2007 (Iwu 144 (I) / 2007), na n'okpuru CySEC Iwu. Usoro ọnụọgụ abụọ nke CySEC maka FX CENTRAL CLEARING Ltd bụ 121 / 10.
Ozi Ụlọ Ọrụ Ụlọ Ọrụ ahụ.
(a) Ọrụ ego:
Ịnabata na nnyefe nke iwu gbasara otu ma ọ bụ karịa Ngwaọrụ.
Imezu iwu maka ndị ahịa.
(b) Ọrụ Mgbakwunye:
Nchekwa na nchịkwa nke Ngwaọrụ Ntanetị maka akaụntụ nke Ndị ahịa, gụnyere ọrụ nlekọta na ọrụ ndị metụtara ya dị ka ego / njikwa ala.
Inye ego ma ọ bụ mgbazinye ego nye onye na-etinye ego iji nye ya ohere ịrụ ọrụ n'ime otu ma ọ bụ karịa Financial Instruments ebe Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ.
Ọrụ mgbanwe ndị ọzọ ebe ọrụ ndị a jikọtara na ndokwa nke ọrụ ego.